Kutheni uNobhala-Jikelele we-UNWTO uZurab Polokashvili engazange anyulwe ngokufanelekileyo?
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zikaRhulumente » Kutheni uNobhala-Jikelele we-UNWTO uZurab Polokashvili engazange anyulwe ngokufanelekileyo?
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zase China eziQhekezayo • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • ISpain Iindaba Eziphambili • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
22 imiz efundwayo
Emva kweminyaka emi-4, kuyacaca ngesiquphe ukuba unyulo luka-2017 lukaNobhala-Jikelele we-UNWTO belingalunganga. UZurab Pololikashvili akufuneki abe nguNobhala-Jikelele wangoku. Kunokubakho ithuba lokuba kwiNdibano yeZizwe eziManyeneyo ezayo eMorocco, le mpazamo inokulungiswa.
Kukho amanyathelo amabini afanelekileyo ekufuneka elandelwe kwinkqubo yonyulo lukaNobhala Jikelele we-UNWTO, kwaye omabini awalandelwanga ngokuchanekileyo ngo-2017.
INYATHELO LOKUQALA kukunyulwa liBhunga elinoLawulo oluPhezulu le-UNWTO okwenzeka eMadrid nge-10 kaMeyi ka-2017.
INYATHELO LESIBINI: Inqaku lama-22 leMithetho yoMbutho lithi: “UNobhala Jikelele uya kuvunywa sisibini kwisithathu uninzi lwamalungu apheleleyo akhoyo kwaye avota kwiNdlu ngokwengcebiso yeBhunga, isithuba seminyaka emine… ” ("amalungu apheleleyo”Kuthetha amazwe azimeleyo). Imigaqo esemthethweni kunye nezinto ezenziweyo zombutho zaphulwa ngokucacileyo.
Ingcebiso yeseshoni ye-105 yeBhunga eliLawulayo le-UNWTO lokucebisa uMnu Zurab Polokashvili waseGeorgia njengoNobhala-Jikelele ukuba angene ezihlangwini zikaGqirha Taleb Rifai ovela eJordani kufuneka ingasebenzi kuba iinkqubo ezifanelekileyo kunye nemithetho yaphulwe ngolunya. Umcebisi wezomthetho we-UNWTO kunye negqwetha uNksz Gomez ucebise kakubi uGqirha Taleb Rifai owayethembele kuvavanyo lwakhe.
Ukuqinisekiswa kuka Mnu. Pololikasvili kwi-XXII ye-UNWTO General Assembly ebibanjelwe e-Chengdu, e-China ngo-Septemba 13-16, 2017 ngesibhengezo bekungekho mthethweni kwaye kuyaphula ngokucacileyo imigaqo exhomekeke kwiingxelo ezikhohlakeleyo zegqwetha le-UNWTO kunye nomcebisi wezomthetho Nksk. Alicia Gómez
UNkosikazi Alicia Gómez usasebenzela uMbutho wezoKhenketho weHlabathi njengomcebisi kwezomthetho kwaye wanyuselwa kwesi sikhundla singcono kungekudala emva kokuba uMnu.Pololikasvili ethathe isikhundla ngoJanuwari 2018.
Obalaseleyo kunye nomdala eTurboNews Umthombo uqhelene kakhulu nomcimbi wahlalutya inkcazo nguNjingalwazi Alain Pellet, owayesakuba ngumcebisi wezomthetho kwi-UNWTO.
Inkcazo kaPellet yobunyani bempikiswano malunga nesindululo somgqatswa lilungu leLungu le-UNWTO icacisa imeko awayekuyo umgqatswa okhuphisanayo u-Alain St. Ange.
Okwangoku, u-Alain St. Ange uvuzwe ngaphezulu kwesigidi seSychelles Rupees ngokususwa ngokungalunganga kunyulo lwe-UNWTO. Ukususwa kwakhe ngokucacileyo kwamnceda uMnu. Pololikasvili ukuphumelela.
Njengoko kunikwe ingxelo eTurboNews Kule minyaka mi-4 idlulileyo, zininzi izinto ezingaqhelekanga ezishicilelweyo kolu shicilelo.
Kukho ithuba elinye lokugqibela lokulungisa ezinye zeempazamo.
Onke amehlo ajonge kwiNdibano yeZizwe eziManyeneyo ezayo eMarrakesh, eMorocco ukuphela kukaNovemba.
Athini amanyathelo angagunyaziswanga kunyulo luka-2017?
Njengoko kuchaziwe ngaphambili, mabini amanyathelo kwinkqubo yokhetho yoNobhala-Jikelele we-UNWTO
Akukho manyathelo mabini olonyulo athe alandelwa ngokuhambelana nemimiselo yezomthetho kunye nenkqubo esekwe yombutho.
Ingcebiso yeBhunga elinoLawulo oluPhezulu
Umgaqo wama-29 weMigaqo yeNkqubo yeSigqeba soLawulo uthi isindululo somntu otyunjiweyo kwisikhundla sikaNobhala-Jikelele senziwa ngokuvota ngokufihlakeleyo kunye nevoti elula ngexesha leseshoni yabucala yeBhunga.
Ibinzana elithi “uninzi olulula, ” enokuthi ilahlekise, ichazwa njengolingana namashumi amahlanu kunye nesinye sevoti (kwimeko yenani elingaqhelekanga, inani elikhawulezileyo elingaphezulu kwesiqingatha seevoti) ezifakwe ngamalungu eBhunga akhoyo kunye nokuvota.
Umthetho uthi: “ukuba akukho mgqatswa ofumana uninzi kuvoto lokuqala, okwesibini, kunye ukuba kunyanzelekile kubanjwe ezinye iivoti zokuthatha isigqibo phakathi kwabaviwa ababini abafumana inani elikhulu leevoti kwivoti yokuqala. ”
Kwimeko apho abaviwa ababini babelana ngendawo yesibini, omnye okanye uninzi lweevoti ezongeziweyo kungafuneka ukumisela ukuba ngoobani abagqatswa ababini abazakuthatha inxaxheba kwivoti yokugqibela.
Ngo-2017, xa abaviwa abayi-6 babebaleka (emva kwe-7th omnye waseArmenia wayelahlile), unyulo lwaluqukunjelwe kwivoti yesibini.
Umnumzana Pololikashvili uphumelele umnumzana Walter Mzembi wase Zimbabwe.
Kwivoti yokuqala, iziphumo yaba: Mnu Jaime Alberto Cabal (Colombia) ngeevoti ezi-3, Nksz Dho Young-shim (kwiRiphabhlikhi yaseKorea) ngeevoti ezisi-7, Mnu.Marcio Favilla (eBrazil) ngeevoti ezi-4, uMnu Walter UMzembi uneevoti ezili-11, kunye noMnu Zurab Pololikashvili ngee-8.
Kwivoti yesibini, uMnu. Pololikashvili ufumene iivoti ezili-18, kunye noMnu Mzembi 15. UMnu.
Ngubani onokuba ngumgqatswa kuNobhala-Jikelele we-UNWTO?
Ukuze ube ngumgqatswa kwisikhundla sikaNobhala-Jikelele woMbutho wezoKhenketho weHlabathi, kuya kufuneka uzalisekise iimeko ezahlukeneyo kwaye ulandele inkqubo, ebichaziwe kule minyaka idlulileyo, ukusukela ngo-1984 ukuya ku-1997.
Kuya kufuneka ubengummi welungu leLungu, kwaye eli lizwe akufuneki libe lafumana iindawo ezingenasizathu kwiminikelo yalo.
Unyulo lukaNobhala Jikelele lukhuphiswano phakathi kwabantu, hayi phakathi kwamazwe. Nangona kunjalo, akukho mntu unokubaleka ekuhambeni kwakhe.
Abagqatswa kufuneka baboniswe ligunya elifanelekileyo lelungu leLungu (intloko yelizwe, intloko yezorhulumente, umphathiswa wezangaphandle, oonozakuzaku abafanelekileyo…).
Le ndima “yecebo lokucoca ulwelo” mayingathathwa njengesiqinisekiso, inkxaso, okanye isindululo esikhutshwe ngurhulumente, njengoko ngamanye amaxesha kukhankanywa ngokungachanekanga kwezinye zeendaba ze-UNWTO okanye amaxwebhu.
Amagama abalulekile: sisindululo nje.
Isigqibo i-CE / DEC / 17 (XXIII) esathathwa liBhunga lesiGqeba kwiseshoni yowe-1984 yama-23, ebeka inkqubo elandelwayo kwada kwaba namhlanje, ithi: “abagqatswa baya kuphakanyiswa ngokusesikweni kwiBhunga ngoonobhala ngoorhulumente bamazwe abo bangabesizwe… ”
Akukho sazisi phakathi komgqatswa nelizwe: akukho lungiselelo leetekisi ezinokunyanzela urhulumente ukuba angenise abagqatswa ababini okanye nangaphezulu.
Nje ukuba kufunyanwe umgqatswa, oko kuyaziswa nge-verbale yiNobhala kumalungu ombutho.
Xa umhla wokugqibela wokufumana abagqatswa ufikelelwe (ngesiqhelo kwiinyanga ezimbini phambi kweseshoni), uxwebhu luyalungiswa yi-Ofisi kaNobhala luze luthunyelwe kumalungu eBhunga abonisa uluhlu lokugqibela lwabagqatswa, kunye nokunxibelelana namaxwebhu ekufuneka enikwe ngumntu ngamnye (ileta Isindululo esivela koorhulumente babo, i-vita vitae, ingxelo yomgaqo-nkqubo kunye nenjongo yolawulo, kwaye, kutsha nje, isatifikethi sezempilo esifanelekileyo).
Kukweziseko zolu xwebhu, ekwakhumbula kananjalo nenkqubo emayilandelwe, apho kuthathwa isigqibo seBhunga elinoLawulo oluPhezulu sokucebisa umtyunjwa kwiNdlu yoWiso-mthetho.
Akubonakali ndawo apho uluhlu lokugqibela lwabagqatswa esele luchaziwe lunokulungiswa kamva.
Nangona kunjalo, uxwebhu i-CE / 112/6 REV.1 ekhutshwe ngo-2020 ukukhokela unyulo oluqhubekayo lukaNobhala Jikelele wexesha lama-2022-2025 ngokumangalisayo lubonisa ukuba “Ukwamkelwa komgqatswa ngurhulumente welizwe eliyilungu kuyimfuneko eyimfuneko kwaye ukurhoxa kwakhe kuya kukhokelela ekungafanelekeni komgqatswa okanye womonyulwa.. "
Oluqwalaselo luyinto esulungekileyo evela kuNobhala wangoku weziko.
Ukubakho kokurhoxiswa kwesindululo sikarhulumente (hayi "iimvumet, ”njengoko bekutshiwo ngaphambili, ayiveli kuwo nawuphi na umbhalo osemthethweni okanye kwisigqibo salo naliphi na iqumrhu- iBhunga kunye neNdibano- ebandakanyekayo kule nkqubo.
Intelekelelo engaqhelekanga yokuba umntu otyunjiweyo angafaneleka phakathi kwinkqubo yonyulo, imeko enokuthi inyanzelise isindululo esitsha esikhutshwe liBhunga kwintlanganiso elandelayo, ayicingelwanga- kwaye kufanelekile! -
hayi kwiMithetho okanye kwiMigaqo yeNkqubo yemibutho emibini ebandakanyekayo.
Uqwalaselo olukhankanyiweyo malunga nokuba kungenzeka ukuba urhulumente asirhoxise isindululo sakhe phakathi kwenkqubo khange ivele kuxwebhu lwe-CE / 84/12 olwakhutshwa ngo-2008 ukukhokela unyulo lowandulela lowo unguNobhala Jikelele wangoku kwithuba lika-2010 -2013, okanye kuxwebhu lwe-CE / 94/6 olwakhutshwa ngo-2012 kwisithuba se-2014-2017.
Okubaluleke ngakumbi, ibingekho kuxwebhu lwe-CE / 104/9 olwakhutshwa ngo-2016 lokulawula inkqubo yonyulo yexesha 2018-2021.
Lo mbhalo kunye nesigqibo seBhunga esihambelanayo esilawula unyulo luka-2017. Inyaniso yokuba kwiminyaka emine kamva kuqwalaselwe into entsha, ngokuchaseneyo nokuqondwa kwangaphambili kwenkqubo, iyaziswa, ibonakala ngathi yinto nje ethethelelayo ukulungisa impazamo eyenziwe ngo-2017 kwithuba lokuchongwa kukaNobhala-Jikelele wangoku.
Umgca wempikiswano ophuhliswe apha ngasentla, kulandela ukuba akukho ndawo kwizicatshulwa ze-UNWTO kunye nokuziqhelanisa nokurhoxisa isindululo sikarhulumente somgqatswa woNobhala-Jikelele, uqinisekisiwe nguNjingalwazi weYunivesithi, owayesakuba ngumongameli weNkundla yeZizwe eziManyeneyo ye-UN. Justice, obengumcebisi wezomthetho kulo mbutho iminyaka engama-30, kwaye nomcebisi wezomthetho wangoku wayengumncedisi kuye.
Ngoku ka eTurboNews uphando oluchaze umfanekiso oqingqiweyo UAllen Pellet. Ugqwetha laseFrance ofundisa umthetho wamazwe aphesheya kunye nomthetho wezoqoqosho kwihlabathi liphela eUniversité de Paris Ouest - Nanterre La Défense. WayenguMlawuli we-Centre de Droit International (i-CEDIN) yeYunivesithi phakathi kwe-1991 kunye ne-2001.
UPellet yingcali yaseFrance kwezomthetho wamazwe aphesheya, ilungu kunye nowayesakuba nguMongameli weKhomishini yeZomthetho yeZizwe eziManyeneyo, kwaye ucebisa oorhulumente abaninzi, kubandakanya noRhulumente waseFrance kwindawo yomthetho welizwe jikelele. Ukwayingcali kwiKomiti yoLamlo yaseBadinter, kunye nompapashi weKomiti yaseFrance yamaJurist ekudalweni kweSigqeba seLwaphulo-mthetho seHlabathi seYugoslavia.
Ube yiarhente okanye igqwetha kunye negqwetha ngaphezulu kwama-35 amatyala phambi kweNkundla yezoBulungisa yaMazwe ngaMazwe kwaye uthathe inxaxheba kwizigwebo ezininzi zamazwe aphesheya nezamazwe ngamazwe (ngakumbi kwindawo yotyalo-mali).
I-Pellet yayinxulunyaniswa notshintsho lwe-World Tourism Organisation (WTO) kwi-arhente ekhethekileyo ye-UN, i Umbutho weZizwe eziManyeneyo wezoKhenketho (UNWTO).
Le ngcaciso kukuphela kwayo ngokungqinelana nomgaqo osisiseko ogqityiweyo kwinqaku lama-24 leMithetho, ukuba ekwenzeni imisebenzi yakhe, uNobhala-Jikelele we-UN World Tourism Organisation, kunye nawo onke amalungu abasebenzi, uzimele. kwaye akafumani myalelo kuye nawuphi na urhulumente, kubandakanya nowakhe. Okufanelekileyo kulawulo lweziko kufanelekile, mutatis mutandis, ukuze umoya ukhokele isikhundla.
Ngo-2017, lo mgaqo osisiseko awukhathalelwanga.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, abagqatswa ababini base-Afrika babekhuphisana ngesikhundla sikaNobhala-Jikelele: UMnu Walter Mzembi waseZimbabwe kunye noMnu.
Kwisenzo esingazange sibonwe kwimbali ye-UNWTO, ngoJulayi 2016, lo mbandela wabekwa kwezopolitiko, ngesigqibo seManyano ye-Afrika saza samkelwa yiSeychelles, ukuxhasa umgqatswa ovela eZimbabwe.
Akuzange ngaphambili kubekho omnye umbutho wezizwe ngezizwe ophazamisane ngendlela engafanelekanga kwimicimbi yangaphakathi yoMbutho wezoKhenketho weHlabathi.
Ngomhla we-8 kaMeyi 2017, kwiintsuku ezimbalwa phambi kwentlanganiso eMadrid ye-Executive Council, uRhulumente wase-Seychelles wafumana inqaku le-verbale evela kwi-African Union icela ilizwe ukuba lirhoxise u-Mnu. umbutho kunye namalungu awo.
Njengelizwe elincinci, iSeychelles yayingenandlela yimbi ngaphandle kokunikezela kwisoyikiso, kwaye uMongameli wayo omtsha wazisa uNobhala wombutho kwiiyure ezimbalwa phambi kokuvulwa kweseshoni yeBhunga, ngokurhoxiswa kwesindululo somgqatswa wakhe.
Amalungu amaninzi akubona oko kugqwetheka ngenxa yokungenelela kukaRobert Mugabe, uMongameli waseZimbabwe, owayesandul 'ukushiya isikhundla sokuba nguSihlalo weManyano ye-Afrika kwaye "engutata" wenkululeko yelizwe lakhe, njengempembelelo enamandla kwiinkokheli zaseAfrika. UGqirha Walter Mzembi wayengumphathiswa kwikhabinethi ka-Robert Mugabe.
Xa wazisiwe ngokuhamba kwelizwe lakhe, uGqirha Taleb Rifai, uNobhala-Jikelele we-UNWTO ngelo xesha, wabongozwa ukuba afune ingcebiso kuNkosazana Alicia Gomez, umcebisi wezomthetho we-UNWTO.
Waxelelwa nguye ukuba u-Alain St. Ange wayengaselungelweni ngokusemthethweni lokugcina isicelo sakhe. Unobhala-Jikelele uTaleb Rifai usanike uSt Ange umgangatho kwintlanganiso yeBhunga ngaphambi kwenqaku le-ajenda emalunga nolonyulo. USngenge wahambisa intetho yeemvakalelo ephikisa ukuba kutheni evunyelwe ukubaleka.
Ngenxa yezizathu ebeziphuhlisiwe ngaphambili, kufanele kuthathelwe ingqalelo ukuba impendulo yomcebisi wezomthetho, engakhange ilungiswe nguNobhala-Jikelele, ibingachanekanga.
Kunzima ukuqonda ukuba unobhala-jikelele owayephuma ngelo xesha wayenokuyijonga njani, njengoko wabhengeza emva koko, ukuba unyulo lokuqhutywa ngokungenampazamo awayejongene nalo, lwalusenzeka rhoqo.
Okona kuncinci, kwabakho ukuthandabuza okunamandla ngokuhambelana kwenkqubo, nakwinyani yokuba esi yayisisihlandlo sokuqala ukwenzeka kwesi sihloko sichanekileyo.
Umcimbi bekufanele ukuba ubekwe kumalungu eBhunga ukuze athathe isigqibo ngenkqubo eza kulandelwa.
Yile nto yenziwe nguSihlalo weseshoni yama-55 yeBhunga lesiGqeba ngo-1997 eManila xa kwavela ingxaki yokutolikwa kwemithetho elawula unyulo.
Ngokuduka komgqatswa waseSeychelles, isivumelwano samakhadi satshintsha ngesiquphe.
Ugqirha Mzembi ushiyeke ekuphela komgqatswa omele iAfrika, ingingqi enelona nani liphezulu leevoti kwiBhunga.
Wahokela ivoti kwivoti yokuqala.
Nangona kunjalo, kwakunzima ngokucacileyo ukuba ummeli waseZimbabwe anyulwe njengentloko yeziko le-UN xa ilizwe kunye noMongameli walo babephantsi kohlwaywa kumazwe amaninzi, kubandakanya i-United States kunye namalungu e-Commonwealth kunye ne-European Union, naphantsi kokugxekwa liBhunga lezoKhuseleko leZizwe eziManyeneyo.
Umnumzana Pololikashvili wayenyulwe ekupheleni kosuku njengesiphumo sokungamkelwa okuqhotyoshelwe kumgqatswa wase Zimbabwe.
Ukuba uMnu. Alain St. Ange
Ngo-Novemba ngo-2019, iNkundla ePhakamileyo yeRiphabhlikhi yaseSeychelles yavuma ukuba semthethweni kwebango elenziwe nguMnu.
Ngokwesi sigwebo, iNkundla yeziBheno yathatha isigqibo ngo-Agasti ka-2021 sokuba iSt Ange ibhatelwe ngeendleko ezenziweyo nangokonakala kokuziphatha.
Unyulo kwiNdibano Jikelele ye-UNWTO eChengdu, China 2017 -Ukunyhashwa kwesibini:
Imfuno yenqaku lama-22 leMithetho yesininzi sesibini kwisithathu kwiNdibano yeZizwe eziManyeneyo yokuchonga uNobhala-Jikelele ichaziwe apha ngasentla.
Ngokomgaqo wama-43 weMigaqo yeNkqubo yeNdibano yeZizwe eziManyeneyo: Lonke unyulo, kunye nokuqeshwa kukaNobhala Jikelele, kuyakwenziwa ngokuvota okuyimfihlo. "
Isihlomelo seMigaqo yeNkqubo simisela iMigaqo eSisikhokelo yokuqhuba unyulo ngokuvota okuyimfihlo, okwenziwa ngokusetyenziswa kwamaphepha okuvota, ilungu ngalinye linelungelo lokuvota, libizwa ngokujika.
Ukuba umgaqo lo ucacile, ukusetyenziswa kwawo kuphakamisa ingxaki ebonakalayo kuba ivoti nganye phantsi kwendlela yokuvota eyimfihlo ithatha ixesha elininzi: ubuncinci iiyure ezimbini zinokulahleka kwi-ajenda engqongqo yeNdibano.
Ke ngoko, xa kusenziwa kubonakala ukuba kuvunyelwene phakathi kwamalungu ukuze kuqinisekiswe ukhetho lomgqatswa ongeniswe liBhunga elinoLawulo oluPhezulu, iNdibano inokuthatha isigqibo sokubeka bucala umgaqo osemthethweni wokuvota ngokuvota okuyimfihlo kwaye iqhubeke nolonyulo loluntu. isibhengezo.
Le ndlela yokwenza izinto, ikhutshelwa kwinkqubo elandelwa yiminye imibutho eyahlukeneyo yamazwe aphesheya, ifuna njengeyona nto ifunekayo ngaphambili ukuba kukho ukungavisisani phakathi kwamalungu ngokwamkela okutshintshiweyo.
Ukuba akunjalo, iMigaqo yeNkqubo iya kuthi yaphulwe.
Ke ngoko, kwiseshoni nganye yeNdibano, xa iqala ngengxoxo yomba we-ajenda yokuqeshwa kukaNobhala-Jikelele, uMongameli weNdibano, efunda iphepha elilungiselelwe yi-Ofisi kaNobhala, wazisa amalungu ngenkqubo kulandelwe, kurekhodwe ukuba kumaxesha ohlukeneyo isikhundla senziwe ngesibhengezo, kodwa sinyanzelisa ukuba ukuba ilungu elinye lifuna ukunamathela kumthetho osemthethweni wokuvota, eli liza kusebenza njengelungelo.
Le yindlela eyaqala ngayo ingxoxo malunga nokonyulwa kukaNobhala-Jikelele kweyoMsintsi ngo-2017 kwi-General Assembly eyayibanjelwe eChengdu.
Iqale ngoSihlalo efunda uxwebhu echaza inkqubo emayilandelwe. Ukulandela umbuzo wakhe wokuba likhona na ilungu elichasene nevoti ngesibhengezo kwaye ecela ukugcinwa ngokungqongqo kweMithetho, iNtloko yabathunywa baseGambia icele indawo kwaye yabiza ivoti eyimfihlo.
Umdlalo bekufanele ukuba uphelile, ingxoxo bekufanele iphele apho, kwaye ukuvota ngasese bekufanele ukuba kuqale.
Uninzi lwabathunywa lwenze ungenelelo olunomdla, nokuba luxhasa ivoti ngokumemeza okanye bafuna ukuhlonitshwa kweMithetho. Ukucaciswa kwabuzwa kumcebisi wezomthetho nakuNobhala Jikelele.
Endaweni yokuthetha nje umthetho, ezinde, ezikhululekileyo, kwaye, ekugqibeleni, amagqabantshintshi angenamsebenzi abandakanyeka ngakumbi kwingxoxo-mpikiswano.
Ingxoxo engapheliyo yaya isiba nzima kwaye iya isabhideka ngakumbi.
Ngokucacileyo, abathunywa abaxhasa uMnu Mzembi, ngakumbi abo baseAfrika, babezama ukufumana isinye kwisithathu seevoti ezingalunganga, ukwenza umqobo kunyulo lwabonyulwa, nokunyanzelisa ukutyunjwa okutsha liBhunga eliPhezulu, nabo baxhasa kunyulo lukaMnu. Pololikashvili okanye esoyika ukubuya komgqatswa waseZimbabwe bebegxininisa kwimfuneko yevoti ngokuthi, "bonisa ubunye bombutho. "
Njengokuba kunjalo, ngenxa yokunqongophala kolwazi lwemithetho nguSihlalo, ubunkokeli obungaqinisekanga obuvela kuNobhala-Jikelele, kunye nokusebenza kakubi komcebisi wezomthetho we-UNWTO u-MS Gomez umanyano lombutho lwalusemngciphekweni kuloo nto ixesha.
Unobhala Jikelele kunye nomcebisi wezomthetho ngekwakukhumbule ukuba kwa ingxoxo efanayo ngenkqubo yenzekile ngexesha le-16th Iseshoni yeNdibano yeZizwe eziManyeneyo eyayibanjwe ngo-2005 eDakar.
NjengaseChengdu, kwaqala impikiswano edidayo malunga nokuvota okunokubakho.
NjengaseChengdu, elinye igqiza- iSpain-lachasa, kodwa abanye abathunywa bacela umgangatho.
UNobhala-Jikelele welo xesha, owayebalekela unyulo kwakhona, wangenelela, nokuba kwakungekho semdleni wakhe, kuba ukuvota ngokumemeza yeyona ndlela ilula yokungabinayo inkcaso. Ukhumbule isicatshulwa senqaku lama-43 leMigaqo yeNkqubo kwaye wacacisa ukuba ukusukela oko ilizwe elinye, elileSpain, lacela ivoti eyimfihlo, ingxoxo yaphela.
Ukuvota okuyimfihlo kwenzekile, kwaye, ngesehlo, lowo ubambe isikhundla uphinde wachongwa ngeepesenti ezingama-80 zeevoti.
Ngokumalunga nokunyulwa kukaNobhala-Jikelele yiNdibano yeZizwe eziManyeneyo, iitekisi ze-UNWTO azishiyi ndawo yokuthandabuza, kwaye kude kube ngu-2017, isenzo seZiko sasingqinelana nezi zibhalo.
Unyulo lwaseChengdu yayilixesha elibuhlungu kwimbali ye-United Nations World Tourism Organisation.
Ngexesha lekhefu kwingxoxo mpikiswano, isivumelwano sagqitywa: endaweni yokuvuma kwakhe ivoti ngokwazisa, uMnumzana Walter Mzembi wanikwa imishini yokwenza izindululo zenguqu kwinkqubo yochongo lukaNobhala-Jikelele. leyo, ewe, ayikhange ilandelwe.
Umnumzana Pololikashvili kunye noMnu Mzembi bangene eqongeni beyoliswa phantsi kwentswahla yokuqhwatywa kwezandla kunye nemincili kuninzi lwamalungu, athe, kwimizuzwana embalwa ngaphambilana, aphula okanye ayaphula iMithetho yeZiko labo.
Ngokumalunga nokukhethwa komtyunjwa eMadrid, ukuba imigaqo yayihlonitshwe kunyulo e-Chengdu, ibali kunye nomntu ophethe i-UNWTO banokuba bohlukile.
Umhlaba wezoKhenketho ngoku ujonge iNdibano yeZizwe eziManyeneyo ye-UNWTO ukulungisa le meko, kunye nokhenketho ukuba luphinde lube ngumdlali owomeleleyo kwihlabathi liphela.
Oku kuyimfuneko ngokukodwa ukukhokela eli shishini libuthathaka kwixesha lasemva kwe-COVID-19. Ifuna ubunkokheli obomeleleyo kunye nemali eninzi.